Alaha u naxariistee Taariikhyahankii weynaa ee Soomaaliyeed Aw jaamac Cumar Ciise oo Geeriyooday |
Alah Naxariistiijano ha siiyee waxaa caawa goor maqribkii ah ku geeriyooday Magaalada Jabuuti DAlka Jabuuti taariikhyahankii weynaa ee Soomaaliyeed Aw Jaamac Cumar Ciise .
Rabbi ha u raxmadee Aw Jaamac Cumar Ciise ayaa ku xanuunsanaa wadanka Jabuuti halkaasoo uu deganaa, kuna noolaa mudooyinkan ugu dambeeyay dambe.
Aw Jaamac wuxuu ahaa qoraa iyo taariikh caan ka ah ku lahaa Soomaalia. Wuxuuna qoray buugaag tiro badan oo isugu jira luuqadaha Soomaaliga iyo Carabiga oo uu wax ku qori jiray ka hor intii aan la qorn Farta Soomaaliga, isagoo ka mid ahaa xubnihii ugu weynaa ee wax ka qoray luuqada aan iminka soomaaliweyn ku hadasho waxna ku qorto.
Aw Jaamac Cumar Ciise wuxuu dhashay sanadkii 1922-kii. Wuxuuna ku dhashay baadiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari halkaasoo aabihii uu ku dhashay, waxaana uu ku dhintay da’da 91 sano jir.
Aw Jaamac Cumar wuxuu isagoo dhalinyaro ah tagay magaalada Muqdisho halkaasoo uu ka bilaabay waxbarasho dhinaca diinta ah, wuxuuna ka mid noqday xertii Sheekh Nuur Cali Colow oo Tafsiirka Quraanka iyo kutubta kale ee diinta ku akhrin jiray masaajido ku yaalla caasimada.
Sanadkii 1965-tii ayuu Aw Jaamac qoray buuggii ugu horeeyay oo ka hadlay taariikhda Soomaalida, waxaana buugaasi uu ahaa Af Carabi. Waxaana lagu daabacay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar.
Sanadkii 1972-kii markii la bilaabay qorista Farta Soomaaliga, Aw Jaamac Cumar Ciise ayaa bilaabay inuu diiwaankii suugaanta iyo taariikhda Soomaalida ee uu hayey ku qoro Af Soomaali kana soo wareejiyo Af Carabiga.
Sanadkii 1991 markii uu dhacay burburkii dawladii dhexe ee dalka ayaa Aw Jaamac u guuray wadanka Jabuuti si uu ugu noolaado, wuxuuna halkaasi ku daabacay buug uu kaga hadlay “Qaranjabkii Soomaaliya” kaasoo ah buug caan ah.
Innaa Lilaali Waa inaa Ileyhri Raajicuun, Illaahay ha u naxariisto marxuumka.
Dhamaan Shaqaalaha Shabakada BosasoPress iyo maamulkoodaba waxay tacsi tiiraanyo leh u diyaraan umada Soomaaliyeed ee uu ka baxay Taariikhyahankan caanka ahaa, waxaan leenahay Ilaahey Samir iyo iimaan ha inaga siiyo si gaar ah eheladii iyo qaraabadii ku dhowaa ee uu ka baxay Marxuumka